‘किस’ गर्नुअघि यी विषयमा ध्यान दिनु अनिवार्य
काठमाडौं/ युवा युवतीमा माया प्रेम गर्ने र त्यसलगत्तै चुम्बन अर्थात किस गर्ने चलन सामान्य हुँदै गएको छ । चुम्बन गर्दा भने केही विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने मायाप्रेम तोडिन सक्छ । चुम्बन गर्दा मुखको सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नियमित रूपमा मुखको सफाइ गर्नुपर्छ, जसका लागि माउथ वास र नियमित बिहान–बेलुकी पेस्ट प्रयोग गर्न...
टाउको दुखाइ कुनै ठूलो रोग होइन, सामान्य मानिन्छ। तर, यही सामान्य मानिने टाउको दुखाइले हामीलाई निकै कष्ट दिन्छ। अनुसन्धानबाट थाहा पाइएका केही सामान्य उपाय अपनाए हामी टाउको दुखाइको सिकार हुनबाट जोगिन सक्छौँ। १। पानीः महिनामा दुई पल्ट कडा वा पाँच पल्ट सामान्य टाउको दुख्ने मानिस सहभागी गराएर एउटा अनुसन्धान गरियो। सहभागीहरूलाई पर्याप्त...
जानी राखे राम्राे – यौनरोग के हो र कसरी सर्छ?
काठमाण्डौ । नेपालका सहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म सबैतिर यौन सम्पर्कका माध्यमबाट सर्ने रोग व्याप्त छ। मानिसको यौन आदतमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता रोग कुनै वर्ग वा समुदायमा सीमित नरहन सक्छ। यौन सम्पर्कका क्रममा अथवा असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारणले सर्ने रोगलाई हामी यौनरोग भनेर चिन्ने गर्छौं। नेपालमा सिफिलिस, गोनेरिया, क्याइमेरिया र...
केराको फूल (बुङ्गो) खानुका अचुक फाईदाहरु
एजेन्सी/ केरा खान सबैलाई मन पर्ने फलफुल हो । स्वादिष्ट केराको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा एकदमै फाईदा पनि गर्छ । केरामा विभिन्न पौष्टिक तत्व पाउनुका साथै भिटामिन मिनरल्स समेत पाईन्छ । केराको फाईदाको बारेमा सबै जानकार भएपनि त्यसको फूलको फाईदा भने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । झरेर, कुहिएर जाने केराको फूल समेत मानव स्वास्थ्यको लागि अति नै फाईदाजनक...
पुर्वेली न्युज डटकमबाट कागतीले खानेकुरालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्र होइन, यसको स्वच्छ सुगन्धले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ । कागतीमा धेरैथरी एन्टीसेप्टिक र एन्टीब्याक्टेरियल सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । आफ्नो ओच्छ्यानको छेउमा कागतीका टुक्रा राख्दा तपाईंलाई शारीरिक र मानसिक फाइदा हुन्छन् । रातभरि कोठामा कागती राख्दा रुघा र...
ब्रेस्ट क्यान्सर हुनबाट बच्न ख्याल गर्नुपर्ने यी कुराहरु
सामान्यतया महिलाहरू अफिस र घरमा व्यस्त रहन्छन। यस्तोमा उनीहरु आफ्नो ख्याल राख्न सक्दैनन् । महिलाहरुमा ब्रेस्ट क्यान्सर सामान्य रोग हो । यसले बिस्तारै महिलाहरुलाई मृत्यूको मुखमा धकेलिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रेस्टमा हुने दुखाईलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । यदि क्यान्सरबाट बँच्नु छ भने, नियमित रूपमा चिकित्सक कहाँ चेकअपको लागि जानु...
पुरुषहरु यसकारण महिलाको स्तनमा आँखा लाउछन
तपाईलाई सायदै थाहा होला पुरुषहरु महिलाको स्तनमा किन आकर्षित हुन्छन? यो प्रश्नले महिलाहरुमाथि पनि त्यतिकै खुल्दुली मच्चाइरहेको हुन्छ। तर यसको जवाफ पुरुषहरुसँग पनि छैन। यो सँग सम्बन्धित केहि तथ्य परक कुराहरुको बारेमा जानकारी लिऔः स्पष्ट रुपमा पुरुषहरु कहिले पनि उनिहरु किन महिलाको स्तन प्रति आकर्षित हुन्छन बताउन सक्दैनन्। यसमा भएको...
इन्टरनेटको विकासले बिक्न छाडे यौन पुस्तक !
मकवानपुर/ पछिल्लो समय तीब्र गतिमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ । नेपालकै पनि केही विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट कै माध्यमबाट अध्यापन हुने गर्दछ । इन्टरनेटको विकाससँगै छापाको प्रयोग घट्दै गएको पाइसँगै छापाको प्रयोग घट्दै गएको पाइएको छ । मानिसहरु घर बसेरै विश्वको हरेक जानकारी लिन सक्नेसम्मको विकास इन्टरनेटले गरेको...
एजेन्सी – यौनसम्बन्धको दौरानमा मानिसहरु प्राय कन्डमको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कन्डमको प्रयोग गर्नु यौनसम्पर्कको लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। यसलाई यौन यो निश्चित समयको लागि उपयुक्त अनि गर्भनिरोधकको अचुक औषधि पनि मानिन्छ । कन्डमले अनिच्छुक गर्भलाई त रोकिदिन्छ तर यदि तपाई धेरै प्रयोग गरेमा यसले तपाईँलाई खतरा पनि निम्त्याउन...